-अनुहारको कालो दाग हटाउने घरेलु ६ उपाय ! जानीराखौ - Online Tamang
-अनुहारको कालो दाग हटाउने घरेलु ६ उपाय ! जानीराखौ
काठमाडौं । तपाईको अनुहारमा आएको कालो दागले हैरान हुनु भएको छ भने अब चिन्ता लिनुपर्दैन । यसका लागि तपाईले सामान्य घरेलु उपायका माध्यममार्फत मुखको कालो धब्बा अर्थात दाग हटाउन सक्नु हुनेछ । कालो दाग हटाउनका लागि धेरै क्रिम प्रयोग गर्दा त्यसले छालामा झन् नकारात्मक असर पुगाउन सक्छ ।
Prev-शरीरबाट छालाका डल्ला हटाउने घरेलु उपाय पुरा पढ्नुस
NextExclusive: त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगलाको विमान दुर्घटना- भिडियो सहित
-Job को लागि इन्टरबिउ दिन जादा बोसले यसरी फाईदा लिएपछी हेर्नुहोस..(भिडियो सहित ).. (2)